2013 September : Oromo Democratic Front
Posted by ODF on September 30, 2013 · Leave a Comment
Seenaa Eenyummaa (Identity) kessatti, ilmi namaa akka jiraataa hawaasaa-fi-siyaasaa (socio-political), eenyummaan isaa akka karaa sirnaa bifa shaniitiin of mulisee argina. Isaanis, kara sirna abbaa-lafummaa (feudal), sirna aango-mootii (monarchical), sirna abbaa-irrummaa namtokkee (tyrannical), sirna sabummaa (national) dhaaf sirna Ambummaa (citizenship) ti. Egaa, Ambumman mullistu eenyummaa hawaasaa-fi-siyaasaa kessaa isa tokko. Ambumman eenyummaa warra kabira wajjin al takka takka woldorgommiin, al takka takka nagaan, al takka takka eenyummaa hunda keessaa isa olaanaa ta’ee yeroo argamu, al takka takkammoo eenyummaa kanneen biroo jalatti liqimsamee, xiqqaatee jiraatee as gahee jira. Hariiroon sirna abbaa-lafummaa kessa jiru hariiro gubbaa-gadii (hierarchical) ta’ee, kan inni itti rarra’u walitti dhufeenya…
Posted by ODF on September 14, 2013 · Leave a Comment
Qabsoon bilisummaa Oromoo tattaaffii irratti milikaawe ni qaba. Milkiiwwan kanneen keessaa tokko Itophiyaa fi Itophiyummaa dhabamuu ummata Oromoo irratti hundaawe diduu dha. Tattaaffi diddaa kana finiinsuudhaaf, Oromummaa fi Itophiyummaa waliif faallaa ta’uu afarsuun dirqii ture. Dhugaattis gaafa tattaaffiin kun eegalame, Oromummaan fi Itophiyummaan waliif faallaa turan. Halli akkasii Itophiyaa kaleessaa jalatti dhugoomee ture. Itophiyaa kaleessaa jalatti Oromoos ta’anii amba Itophiyaas ta’uun hin danda’amu ture. Jechuun, Itophiyummaa gonfachuun kan danda’amu yoo Oromummaa mulqachuudhaaf qophii ta’an qofa ture. Namni afaan Amaaraa hin dubbanne, akka amba Itophiyaatti hin ilaalamu ture. Kan aadaa Amaaraa hin maxxanfanne fi kan seenaa Amaaraa hin leellifnes, akka amba…
RBO – August 2013
Posted by ODF on September 4, 2013 · Leave a Comment
Here you will find Radio Bilisummaa Oromoo programing for the month of August.
Walgahii ADO – Alberta, Canada
Addi Demokiratawaa Oromoo/ADOn ummanni Oromoo baroota dheeraaf mirga humnaan sarbame deeffatee, biyya isaa irratti abbaa, qabeenya isaa irratti abboomaa ta’ee akka jiraatuuf qabsoo inni gaggeessaa turee fi jiru akka fiixa ba’uuf gahee isaa gumaachuuf qabsa’a. Akkuma beekamuu fi irra deddeebi’amee himame dhaloota ADOf kan sababa ta’e, Qabsoo ummanni Oromoo baroota dheeraaf gaggeessaa tureen injifatnoolee argate qabatee garafuulduraatti tarkaanfachuu irra of duuba deebi’aa deemuu qabsoo ti. gamabiraan ammoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waldhabdee fi lolli jiru nagaan furamee, qabsaa’onni Oromoo wal- loluu dhiisanii diina isaanii qofa irratti akka bobba’aniif yaaliin baroota dheeraaf ta’aa ture fachaluu isaa, ABO tokkorraa gara 4ykn…